Wednesday February 03, 2016 - 02:46:08 in Articles by Super Admin
Waagacusub.info- Diyaaradda Daallo Airlines ayuu qarax xoogan gilgilay waxyar kadib markii ay ka duushay Garoonka diyaaradaha Muqdisho iyadoo goobjoogayaalna arkeen qof ka duulay diyaaradda oo la rumeeysan yahay inuu is qarxiyay. Qofka la aaminsan yahay inuu is qarxiyay ayaa meeydkiisa laga helay duleedka Magaaladda Balcad kadib markii uu madaxiisa ka faniinay daaqad uu qaraxa jibiyay .
Qofka la helay wuxuu qaraxa ka galaaftay caloosha iyo lug ka maqan ,sidoo kalena waa qof go-go-ay oo lama aqoonsan karo wejigiisa.
Maamulka Daallo Airlines ayaa ku gaabsaday inuu qarax ka dhacay diyaaradooda oo si nabadda ugu soo degtay garoonka Muqdisho.
Diyaaradda Daallo Airlines oo ay booqdeen Wariyeyaal ka tirsan Waagacusub waxeey ahead mid qaraxu ka duleeliyay keel weyn taas oo ka marqaati kacday in qof isku dhex miidaamiyay ama qarax lagu xiray uu qarxay hasse yeeshee waxeey Xeeldheerayaasha rumeeysan yahay in qaraxa uusan u dhicin sidii loo qorsheeyay.
Daallo Airlines oo laga leeyahay Hargeysa waxaa maamulo ka ah nin ka tirsan Sirdoonka Somaliland oo lagu magacaabo Muniir Aba Siti ,waxaana la rumeeysan yahay in qaraxa ay ka badbaaday laga soo abaabulay Hargeysa iyadoo bartilmaameedku ahaay in lagu dilo Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Somalia oo diyaaradda la socday.
Saraakiisha Sirdoonka Somaliland waxeey iska fogeeyeen eedeeynta loo jeediyay waxeeyna kiiskaas ku sheegeen shirqool ay soo abaabuleen Saraakiisha Sirdoonka Somalia kaas oo la doonayay in lagu qarxiyo Daallo Airlines maadama laga leeyahay Hargeysa.
Dowladda Federalka Somalia iyo Maamulka Somaliland waxaa maalmahii tegay ka dhaxeeyay khilaaf gaaray in Agaasimaha Laanta Socdaalka Somalia joojiyo duulimaadyadii tegi jiray Hargeysa laga bilaabo 22 -02-2016.
Wasiirka Arrimaha gudaha Somaliland Cali Warancade ayaa warqad codsiya u soo diray Jeneral Gaafow isagoo weeydiistay in xafiis lagu sameeyo Baasabooradda Somalia laga furo Hargeysa.
Sikastaba ha ahaatee,Daallo Airlines oo ah diyaarad gaboowday waxeey halis ku tahay nolosha dadka raaca,waxaana muhiima in diyaaradaas gaboowday laga mamnuuco Somalia.